လောင်ကျွမ်းဖူးတဲ့ နှလုံးသား ဒီမိုးနဲ့ အေးချမ်းနိုင်ပါ့မလား ကယောင်ကတမ်း ဖြစ်လို့နေပြီ။ အဟုတ်အမှန်တွေကိုဇယားချတော့ ပျားတုတ်ခံရမယ့်အဖြစ် ချ...
ဂယောင်ချောက်ခြားမှုများစွာနဲ့ အာရုံတွေကလဲ အထွေထွေ အပြားပြား ကောင်းကင်က လမင်း ရုတ်တရက်ပြုတ်ကျလာတာလား ဘာရယ်တော့ သေချာမသိပေမယ့် ငါ့အသဲ ပြားချပ်ခ...
စံပယ် တဆုပ်နဲ့ ဟန်လုပ်ပြီး ဘာမှမရေးပါဘူး ကဗျာ တကြောင်း ခံစားချက်ပေါင်းမနဲတော့ မျက်ရည်တွေ စုပေါင်းပြီး နှလုံးသားတွေကိုလဲ အရောင်းဆိုင်မပို့န...
တွေ့မယ့်တွေ့တော့ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ဘာမှ ပိုင်တာမရှိ မမြင်ရတဲ့ အနာဂတ်လဲ နတ္တိ ဗလာတွေ ရင်ထဲလာငြိ အထီးကျန်ညတွေလဲ တွဲခေါ်မည့်သူမရှိ နေမထိ ထို...
အိန်ဂျယ်လေး မိုးငွေ့ ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း
ဘ၀တွေ ယောင်ပေပေ မဖြစ်ပဲ ပန်းနုရာင်နှလုံးသားနဲ့ ဘ၀ကို တစ်ကိုယ်တည်းရုန်းကန် အမှန်တော့ ရင်ထဲမှာအချစ်ရှိတယ် ဒီအမေ ဒီအဖေ မွေးလို့ မြင့်မြတ်တဲ့...
အလတ်ကြီးရှိနေသေးတဲ့ ငါ့ နှလုံးသားကို ငါ သနားလိုက်တာ ဖြုန်းတီးမိနေတဲ့ အချိန်တချို့ ကိုယ့်ကဗျာ ကိုယ်ပြန်ရွတ်ဖို့ စိတ်တွေ လေးလံလေသလို ...
ခံစားချက် ကဗျာ (8)
***WIN RAR CLICK
GOOGLE TALK CLICK
INTERNET SPEET UP CLICK
FLISH PLAYER CLICK
REAL PLAYER CLICK
WINDOWS MEDIA PLAYER CLICK/
DOWN MOZILLA FIREF CLICK
သကမိဘမဲ့စုပေါင်းအလှူ.....(၁) - ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလက ကျွန်မတို့ ရုံးကအဖွဲ့သားတွေ ကိုယ်ကုသိုလ်ပါနိုင်သမျှလေးစုပြီး သင်္ကန်းကျွန်းကြီးရွာ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အာစိဏကံကျောင်းကို အလှူပစ္စ...
ပင်လယ်စာတုံယမ်းဟင်းချို - Seafood Tom Yum တုံယမ်းဟင်းချိုကိုဒေသအလိုက်မတူညီတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးချက်ကြပါတယ်။ ဆိုဖီယာရဲ့ယိုးဒယားဆရာနှစ်ယောက်ချက်တာလည်းတမျိုးဆီပါတယောက်ကနို့စိမ်းနဲ့အုန်းန...
နေမြင့်မြန်တဲ့ မနက် -
ဆန်းဆန်းတင့် (၁) ၊ ကြွက်ကလေးနဲ့ ကိုယ် - ကိုယ်ဟာ ဆန်းဆန်းတင့်သူတစ်ယောက်ပါ။ အဲဒိအကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အရင်ကတော့ ပေါ့ပေါ့ဆဆပါပဲ။ တဖြည်းဖြည်း ပျော်ရွှင်မှုတွေ နည်းနည်းလာတာကို အသက်ကြီးလာတဲ့ လက္ခဏာလု...
Feeling 30 - မစန်းထွန်းရေးတဲ့ ဘာမှတ်နေလဲ ဆိုတော့ ပိုစ့်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီး အတွေးလေးတစ်ခုဝင်လာတယ်…ကိုယ့်အကြောင်းပဲဆိုပါတော့ .. ကိုယ်ဟာ ငယ်ငယ်တည်းက သူတပါးကို အားနာတတ် သည်းခံတ...
တနှစ်ပတ်လုံး ခံစားချက်အတို - တရွက်နု ပြီးတော့ အကုန်လုံးလိုက်နုတဲ့ နွေကို ပီပီပြင်ပြင် နူတ်ဆက်ခဲ့ပြီကွယ်.... တရွက်ကြွေ ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်လို့ကြွေတဲ့ ဒီဆောင်း...အသစ်ဖြစ်နေပြီ တပင်လုံ...
A Nation Mourns - Photo Credit: Internet I'm notaNobel literate nor on any position either. (A drive has lead me to mention this which is there are people who are very k...